यहोवाका साक्षीहरू प्रकोपमा परेकाहरूलाई राहत दिन्छन्‌? | अक्सर सोधिने प्रश्नहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काबाइली काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डेनिश ताङ्काराना तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो बोस्नियन भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मिहे मूर मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लो जर्मन वलिसियन वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
हो, यहोवाका साक्षीहरू प्रकोपबाट क्षति भोगेकाहरूलाई राहत दिने गर्छन्‌। गलाती ६:१० मा बाइबलले यस्तो सल्लाह दिएको छ: “आओ, हामी सबैको भलाइ गरौं, अझ विशेष गरी एउटै विश्वास हुने हाम्रा भाइबहिनीहरूको।” यसैअनुरूप हामी यहोवाका साक्षीहरूलगायत अरू सबैलाई आवश्यक राहत दिएर मदत गर्छौं। त्यस्तो समयमा पीडितहरूलाई नभई नहुने भावनात्मक र आध्यात्मिक मदत पनि हामी दिने गर्छौं।​—⁠२ कोरिन्थी १:​३, ४.
कुनै ठाउँमा प्रकोप आइपरेमा त्यहाँको मण्डलीका एल्डरहरूले मण्डलीसित सङ्‌गत गरिरहेका सबैलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छन्‌। साथै तिनीहरू सुरक्षित छन्‌ कि छैनन्‌ अथवा तिनीहरूलाई कस्तो किसिमको मदत चाहिन्छ भनेर पक्का गर्छन्‌ र तुरुन्तै आवश्यक मदत उपलब्ध गराउँछन्‌। अनि तिनीहरूको अवस्थाबारे र तिनीहरूलाई तत्काल गरिएको मदतबारे यहोवाका साक्षीहरूको स्थानीय शाखा कार्यालयलाई खबर गर्छन्‌।
यदि स्थानीय मण्डलीले आवश्यक मात्रामा राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ भने यहोवाका साक्षीहरूको परिचालक निकायले आवश्यक राहतको प्रबन्ध मिलाउँछ। सुरु-सुरुका ख्रीष्टियनहरूले पनि अनिकाल परेको बेलामा एकअर्कालाई यसरी नै मदत गर्थे। (१ कोरिन्थी १६:​१-४) राहतकार्यलाई व्यवस्थित गर्न र यसको नेतृत्व लिन स्थानीय शाखा कार्यालयले राहत समिति गठन गर्छ। अरू इलाकाका साक्षीहरूले पनि खुसीसाथ आफ्नो समय र श्रोत साधन खर्च गरेर मदत गर्छन्‌।​—⁠हितोपदेश १७:⁠१७.
यहोवाका साक्षीहरूको शाखा कार्यालयमा पठाइने अनुदान प्रकोपबाट पीडित भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि प्रयोग गरिन्छ। (प्रेषित ११:​२७-३०; २ कोरिन्थी ८:​१३-१५) राहतकार्यमा मदत गर्न आउनेहरू कुनै ज्याला नलिई स्वेच्छाले काम गर्छन्‌। त्यसैले राहतको लागि भनेर छुट्टयाइएको रकम पूर्णतया राहतकार्यमै प्रयोग गरिन्छ, उद्धारकर्मीहरूलाई तलब दिन प्रयोग गरिंदैन। अनुदानस्वरूप उपलब्ध कुनै पनि कुराको दुरुपयोग नहोस् भनेर हामी निकै विचार पुऱ्याउँछौं।​—⁠२ कोरिन्थी ८:⁠२०.
यहोवाका साक्षीहरू आवश्‍यक परेको बेला सहायता गर्छन्‌।